मन्दिर सफा Archives - सत्य वेद पुुस्तकहरू
Tag: मन्दिर सफा
दिन २: येशूको द्धारा मन्दिर बन्द गरिनु… घातक प्रदर्शन तिर लैजान्छ
येशूले यरूशलेममा राजाको रूपमा दाबी गर्दै र सबै देशहरुका निम्ति एक ज्योतिको रूपमा प्रवेश गर्नुभयो। यो इतिहासको सबैभन्दा अशांत सप्ताह मध्ये एक शुरू भयो, जुन आज पनि महसुस गरिन्छ। तर उहाँले मन्दिरमा पछि के गरे जस्का कारण अगुवाहरुसँग उहाको उग्र झगडाको विस्फोट भयो। त्यो मन्दिरमा के भयो भनेर बुझ्न हामीले यसलाई आजको सब भन्दा धनी र लोकप्रिय मन्दिरहरूसँग तुलना गर्नुपर्दछ।
भारतको समृद्ध र प्रसिद्ध मन्दिरहरू
(राजराजेश्वरम वा पेरुवुटैयार कोविल) तमिल राजा चोल १ द्वारा (१००३—१०१० ईस्वी सन् ) मा निर्माण गरिएको थियो , यसलाई एक शाही मन्दिरको रूपमा बनाइएको थियो। यसको निर्माणको पछाडि राजा र राज्यको सामर्थ्य र स्रोतको साथ, त्यो शाही मन्दिर विशाल थियो, जुन विशाल रूपमा काटिएको ढुङ्गाबाट बनाइएको। जब बृहदीश्वर मंदिरको निर्माण पूर्ण भएपछि तब यो भारतको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर थियो र आज यसलाई ” महान जीवित चोल मन्दिर ” को उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ।
• भव्य बृहदीश्वर मन्दिर
बृहदीश्वर अवस्थित भएको स्थान
बृहदीश्वर: एउटा अर्को दृश्य
कैलासा पर्वतमा शिवको नियमित घरको लागि दक्षिणी घरको रूपमा निर्मित, यो एक नियोक्ता , एक जमिन्दार र एक ऋणदाता को रूपमा पनि काम गर्दथे। यी क्रियाकलापहरूको साथ बृहदीश्वर मंदिर दक्षिणी भारतको प्रमुख आर्थिक संस्थामा परिणत भयो, जसमा धेरै धनसम्पत्ति थियो। राजाको सरकारले शाही मन्दिर कर्मचारीहरुको नियुक्त गर्‍यो जसले राम्रो परिभाषित शक्ति र जिम्मेवारीहरू भित्र रहेर काम गर्थे। नतिजा स्वरूप, कुनै अन्य मन्दिरसँग यस मंदिरको तुलनामा सम्पत्ति, सुन र नगद थिएन, जब सम्म यो मन्दिरको महिमाको तल दिइएका मन्दिरको अगाडि यस मन्दिरको महिमा घटेन …….
यो आंध्र प्रदेशको तिरुपति मा अवस्थित छ। मन्दिर वेंकटेश्वर (बालाजी, गोविन्द, वा श्रीनिवास) लाई समर्पित छ। यस मन्दिरको अन्य नामहरू : तिरुमाला मन्दिर, तिरुपति मन्दिर र तिरुपति बालाजी मन्दिर हुन। यी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नियन्त्रित हुन्छन्, जसले यस मन्दिरबाट उत्पन्न राजस्वको प्रयोग गर्दछन। वेंकटेश्वर मन्दिर भारतको सब भन्दा धनी मन्दिर हो र भनिन्छ यो विश्वको सबैभन्दा धनी धार्मिक संस्थाहरु मध्ये एक हो।
तिरुपतिमा स्थित व्यंकटेश्वर मन्दिर
आंध्र प्रदेश मा अवस्थित भएको स्थान
यसले नियमित रूपमा प्रति दिन एक लाख आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्दछ र भक्तहरूबाट प्रचुर मात्रामा भेटीहरू, सामान्यतया नगद र सुनको रूपमा, तर साथमा बाल पनि प्राप्त गर्दछ। यसको पछाडिको कथा व्यंकटेश्वरको दाइजोको जालमा फसेर एक स्थानीय केटीसँग बिहे गरेको बारेमा हो । धेरै भक्तजनहरूले विश्वास गर्दछन् कि तिनीहरूले उसकोलागी त्यो ब्याजको केही अंश तिर्ने काममा मद्दत गर्छन्। कोविड–१९ को कारण, मन्दिर कठिन समयबाट गुज्रीरहेको छ र १२०० श्रमिकहरूले काम छोड्नु परेको छ।
पद्मनाभस्वामी मन्दिर …
केरलमा हालैमा सबैभन्दा धनी मन्दिरहरूको सूचीमा सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा छ। यस मन्दिरमा पद्मनाभस्वामी, सर्प आदि शेषनागको माथि विराजमान, प्रमुख देवता हुन्। यसको सब भन्दा ठूलो पर्व लक्षा दीपम् , वा एक लाख दीपक हुन् जुन हरेक ६ बर्षमा एक पटक आउँदछ। २०११ मा, सरकारी अधिकारीहरूले घोषणा गरे कि उनीहरूले पद्मनाभस्वामी मन्दिरको गुप्त भूमिगत कोठामा बोरामा हीरा, सुनका सिक्का, सुनका मूर्तिहरू, गहना र अन्य सम्पत्ति भएको खजाना भेट्टाए। विज्ञहरू अब यसको मूल्य दुई लाख करोड अमेरिकी डलर हुने अनुमान गर्छन्।
पद्मनाभस्वामी अवस्थित भएको स्थान
हिब्रूहरूको एउटा मात्र मन्दिर थियो, र त्यो यरूशलेममा थियो। बृहदीश्वर जस्तै ,यो पनि एक शाही मन्दिर थियो, जसलाई राजा सुलेमानले ९५० ईसा पूर्वमा निर्माण गरेका थियो। यो धेरै नक्काशी, सजावट र धेरै सुनको साथ विस्तृत संरचना थियो। हिब्रूहरूले पहिलो मन्दिरको विनाश पछि ठीक उही ठाउँमा दोस्रो मन्दिर बनाए। शक्तिशाली हेरोद महान् ले यस मन्दिरको विस्तार व्यापक रूपमा गर्‍यो, जसले गर्दा येशूको प्रवेशको समयमा यो रोमी साम्राज्यको सब भन्दा प्रभावशाली संरचनाहरुमध्ये एक थियो, जुन व्यापक रूपले सुनले चारैतिरबाट सजिएको थियो। रोमी साम्राज्यभरि रहेका यहूदी तीर्थयात्रीहरू र पर्यटकहरूको स्थिर प्रवाह ती चाडपर्वहरूमा श्रद्धालुहरूको रूपमा बाढी जस्तो हुन्थ्यो। यस प्रकार त्यहाँ पुजारीहरू र आपूर्तिकर्ताहरूको ठूलो कार्यबल थियो, जसले मन्दिरको पूजालाई एक समृद्ध उद्योगमा परिणत गरेको थियो।
यरूशलेम मन्दिरको ऐतिहासिक नमूना
यरूशलेमको मन्दिरको माथिल्लो भागमा स्थित ठूलाठूला भवनहरू
धन, प्रतिष्ठा, शक्ति र वैभव मा यो मन्दिर बृहदीश्वर, वेंकटेश्वर र पद्मनाभस्वामी मन्दिर जत्तिकै थियो।
यद्यपि यो अन्य तरिकामा फरक थियो। यो सम्पूर्ण देश भरि एकमात्र मन्दिर थियो। यसको परिसरमा कुनै एउटा पनि मूर्ति वा मूर्तिहरू थिएनन्। यसले यो कुरालाई दर्साउँछ की परमेश्वरले आफ्नो प्राचीन हिब्रू अगमवक्ताहरु द्वारा उहाँको बासस्थानको बारेमा बोल्नुभएको थियो।
१. परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “स्‍वर्ग मेरो सिंहासन हो, र पृथ्‍वीचाहिँ मेरो पाउदान हो। मेरो निम्‍ति तिमीहरूले बनाउने भवन कहाँ छ? मेरो विश्राम गर्ने ठाउँ कुन हुनेछ?
२. के यी सबै थोक त मेरै हातले बनाएका होइनन्‌, र यसरी यी हुन आए?” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। “जो आत्‍मामा दीन र चूर्ण छ, र मेरो वचनमा काम्‍दछ, त्‍यसलाई म आदर गर्दछु।
यशैया: ६६: १-२अ
यो मन्दिर त्यो थिएन जहाँ परमेश्वर बस्नुहुन्थ्यो । यसको सट्टामा, यो त्यो स्थान थियो जहाँ मानिसहरूले परमेश्वरलाई सिधै भेट्न सक्थे, जहाँ उहाँको उपस्थिति सक्रिय रूपमा थियो। परमेश्वर नै त्यहाँ सक्रिय मध्यस्थक हुनुहुन्थ्यो, उपासक होइन।
सक्रिय मध्यस्थक जाँच: परमेश्वर वा तीर्थ यात्री?
यो यसरी सोच्नुहोस्। बृहदीश्वर, व्यंकटेश्वर र पद्मनाभस्वामी मन्दिरहरूमा जाँदा, भक्तहरूले कुन देवताको पूजा गर्ने भनेर छनौट गर्छन्। उदाहरणका लागि, यद्यपि बृहदीश्वर शिवलाई समर्पित छ, तथापि यसमा विष्णु, गणेश, हरिहर (आधा शिव, आधा विष्णु), सरस्वती सहित अन्य देवताहरू छन्। त्यसैले भक्तहरूले बृहदीश्वर प्रवेश गर्दा कुन देवताहरूको पूजा गर्ने भनेर छनौट गर्ने आशा राख्दछन् । तिनीहरूले सबैलाई ,कोहीलाई ,वा उनीहरूको मनपर्ने कोहीलाई छनोट गरेर पूजा गर्न सक्छन् । यिनी सबै मन्दिरहरू मा साँचो यो छ कि यिनमा धेरै मुर्तिहरू छन्। देवता छनौट गर्नको लागि तीर्थ यात्रिमा भर पर्दछ।
यसबाहेक, यी मन्दिरहरूमा कस्तो प्रकार वा मात्राको भेटी दिने भनेर भक्तजनहरूले छनौट गर्दछन्। तीर्थयात्रीहरु , राजाहरु र अधिकारीहरू प्रत्येकले के दिने भनेर निर्णय गरेपछि यी मन्दिरहरू सयौं वर्षहरूमा धनी भए। मन्दिरहरूमा देवताहरूले आफुलाई कुन भेटी दिनुपर्छ भन्ने बारेमा केहि भनेका थिएनन्।
यद्यपि हामी देवीदेवताको पूजा गर्न तीर्थयात्रा गर्छौं, हामी यस्तो तरिकाले काम गर्छौ जस्तो की देवताहरू वास्तवमा शक्तिहीन छन् किनकि उनीहरूले हामीलाई छनौट गरेको आशा हामी गर्दैनौं; बरु हामी उनीहरूलाई छान्दछौ।
यहाँ यस प्रश्नलाई सोध्न को लागि प्रेरित गर्दछ कि मन्दिर, परमेश्वर वा तीर्थयात्रिमा सक्रिय मध्यस्थक को हो, हामीले बुझ्न सक्दछौं की दुःख भोग सप्ताहको २ दिन,सोमबार,मा येशूसंग के भएको थियो। त्यो मन्दिरका परमेश्वर, जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनुभयो, ले उहाँ र आवश्यक भेटीलाई छान्नुभयो। यस परिप्रेक्ष्यको साथ हामी पृष्ठभूमिको नियमहरूलाई समीक्षा गर्दछौं।
त्यस दिन भेडाको चयन गर्दै
येशूले पवित्र दुःख भोग सप्ताहको १ दिन, निसान ९ , आइतबार यरूशलेममा प्रवेश गर्नुभयो। प्राचीन हिब्रू वेदहरूले नीसान १० को अघिल्लो दिनको लागि नियमहरू दिए, जुन उनीहरूको क्यालेन्डरमा यसलाई अद्वितीय बनाउँदछ। पन्ध्र सय वर्ष पहिले, परमेश्वरले मोशालाई आउँदै गरेको निस्तार चाडको तयारी गर्ने तरिकाबारे निर्देशन दिनुभएको थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो:
१. मिश्रदेशमा परमप्रभुले मोशा र हारूनलाई भन्‍नुभयो,
२. “यो महिनाचाहिँ तिमीहरूका निम्‍ति महिनाहरूको सुरु, वर्षको पहिलो महिना हुनेछ।
३. इस्राएलका सारा समुदायलाई यसो भन, ‘कि महिनाको दशौँ दिनमा तिनीहरू हरेकले आफ्‍नो-आफ्‍नो परिवारको निम्‍ति, हरेक घरानाअनुसार एक-एक पाठो ल्‍याएर राखोस्‌।
प्रस्थान १२: १-३
… र केवल त्यो दिन
नीसान यहूदी वर्षको पहिलो महिना थियो। त्यसैले, मोशादेखि प्रत्येक यहूदी परिवारले निसान १० मा आउँदै गरेको निस्तार चाडको लागि भेडाको छनौट गर्नको लागि भने। उनीहरूले त्यस दिन मात्र छनौट गरे। तिनीहरूले त्यो यरूशलेमको मन्दिर परिसरमा निस्तार-चाडका भेडाहरु छनोट गरे – ठीक त्यहि ठाउँमा जहाँ अब्राहमको बलिदानले यरूशलेमलाई धेरै अघि पवित्र बनाएको थियो। एउटा विशेष स्थानमा, एक स्पष्ट दिन (नीसान १०) मा, यहूदीहरूले आउँदो निस्तार चाड (नीसान १ 14) को लागि आफ्नो भेडाका पाठाहरू छान्थे।
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, मानिसहरू र जनावरहरूको विशाल भीड, अदलबदल व्यापारको आवाज, मुद्रा विनिमयले नीसान १० मा मन्दिरलाई उन्माद बजारमा परिणत गरेको थियो। बृहदीश्वर, भेन्कटेश्वर र पद्मनाभस्वामी मन्दिरमा देखिएका गतिविधि र तीर्थयात्रीहरू तुलनात्मक रूपमा शान्त देखिन्छन्।
मन्दिर बन्द गर्नेको द्वारा-येशू छनिनुभएको
सुसमाचारको पुस्तकले लिपिबद्ध गर्दछ की त्यस दिन येशूले के गर्नुभयो । जब यसले ‘भोलिपल्ट बिहान’ बताउँछ, यो उहाको यरूशलेममा मन्दिरमा निस्तार-चाडको भेडाहरु रोज्ने , अर्थात निसानको १० औं दिन अर्थात शाही प्रवेशको पछिको दिन थियो,
येशू यरूशलेम प्रवेश गर्नुभयो र मन्दिरको दरबार (नीसान ९) मा आउँनुभयो ।
अर्को दिन बिहान (निसान १०) …
अर्को दिन (निसान १०)
मर्कुस ११: १२अ
१५. अनि यरूशलेममा पुग्‍नुभएपछि उहाँ मन्‍दिरभित्र पस्‍नुभयो, अनि मन्‍दिरमा किनबेच गर्नेहरूलाई बाहिर निकाल्‍नुभयो र पैसा साट्‌नेका टेबिलहरू र परेवा बेच्‍नेका बस्‍ने ठाउँहरू पल्‍टाइदिनुभयो।
१६. उहाँले कसैलाई कुनै थोक मन्‍दिरबाट लैजान दिनुभएन।
१७. अनि उहाँले शिक्षा दिँदै भन्‍नुभयो, “के यसो लेखिएको छैन, ‘मेरो घर सब जातिहरूका निम्‍ति प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ’? तर तिमीहरूले त यसलाई डाँकूहरूको अड्डा बनाएका छौ।”
येशू सोमबार, नीसान १० मा मन्दिरमा पस्नुभयो र उत्सहापुर्वक व्यापारिक गतिविधि बन्द गर्नुभयो। विशेष रूपमा अन्य राष्ट्रका मानिसहरूका लागि पनि किनबेचको कारण प्रार्थनाको लागि अवरोध खडा भएको थियो। यी जातिहरुका लागि एक ज्योति भएकाले, उहाले व्यापारको कामलाई रोक्दै त्यस अवरोधलाई टोड्नुभयो। तर केही नदेखिने कुरा पनि एकै साथ घट्यो, जुन तल दिएको शीर्षकबाट थाहा पाइन्छ की स्वामी यूहन्ना ले यसको पहिचान येशूसंग चिनाउनुभएको थियो।
परमेश्वरले आफ्नो भेडालाई छान्नुहुन्छ
उहाँकोको परिचय दिँदै यूहन्नाले भनेका थिए:
२९. भोलिपल्‍ट उनले येशूलाई आफूतिर आइरहनुभएको देखेर भने, “हेर, संसारको पाप उठाइलैजाने परमेश्‍वरका थुमा!
येशू “परमेश्वरको थुमा” हुनुहुन्थ्यो। अब्राहमको बलिदानमा, उहाँ त्यही परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले अब्राहमको छोराको ठाउँमा भेडालाई बलिदानको लागि छान्नुभयो । मन्दिर पनि यही स्थानमा थियो। जब येशूले नीसान १० को दिनमा मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो तब परमेश्वरले उहाँलाई आफ्नो निस्तारको थुमाको रूपमा छान्नुभयो। छनौट हुनको लागि उहाँ ठीक यही दिनमा मन्दिरमा हुनुपर्थ्यो ।
र उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो।
परमेश्वरको छनोटको बुलावटको विषयमा धेरै पहिले नै भविष्यवाणी गरिएको थियो:
बलिदान र तपाईं इच्छा थिएन अर्पण
तर मेरो कान तिमीले खोल्यो—
तपाईं होमबलि र पापबलिहरू चाहानु हुन्न।
Then तब मैले भनें, “म यहाँ छु, म यहाँ छु।
यो मेरो बारेमा पुस्तकमा लेखिएको छ।
8 हे परमेश्वर, म तपाईंको इच्छा पूरा गर्न चाहन्छु।
तपाईंको व्यवस्था मेरो हृदयमा छ। ”
भजनसंग्रह ४०: ६–८
मन्दिरको गतिविधिहरू उपहारहरु र भेटीहरुद्वारा सञ्चालन हुन्छन्। तर यो कहिल्यै परमेश्वरको प्राथमिक इच्छा थिएन। भविष्यवाणीले संकेत दिएको थियो कि उहाँ एक निश्चित व्यक्तिलाई चाहनुहुन्थ्यो। जब परमेश्वरले उहाँलाई देख्नुभयो, उहाले उहाँलाई बोलाउनु हुन्छ, र ती व्यक्तिले प्रतिउत्तर दिन्छन् । यो त्यसबेला भएको थियो जब येशूले मन्दिरलाई बन्द गर्नुभयो । भविष्यवाणीले यो विषयमा पहिले नै भनेको थियो र त्यस्तै तरिकाबाट जसमा घटनाहरूले सप्ताहको बाँकी भागलाई यसको प्रदर्शन गर्‍यो।
किन येशूले मन्दिर बन्द गर्नुभयो
उहाले यस्तो किन गर्नुभयो? यशैयाको भनाइको साथ येशू जवाफ दिनुहुन्छ, ‘मेरो घर सबै जातिका लागि प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ।’ पूरा भविष्यवाणीलाई तल पढ्नुहोस् (उनको उद्धरणलाई तल रेखांकित गरिएको छ)।
६. “परमप्रभुको सेवा गर्न, परमप्रभुको नाउँलाई प्रेम गर्न र उहाँको आराधना गर्न, शबाथ-दिन बिटुलो नपारी मान्‍न र मेरो करार पालन गर्न परमप्रभुमा बाँधिएका सबै विदेशीहरूलाई
७. म मेरो पवित्र पर्वतमा ल्‍याएर मेरो प्रार्थनाको घरमा आनन्‍दित तुल्‍याउनेछु। तिनीहरूका होमबलि र बलिदानहरू मेरो वेदीमा ग्रहणयोग्‍य हुनेछन्‌, किनकि मेरो भवन सबै जातिहरूका निम्‍ति प्रार्थनाको घर भनिनेछ।”
ऐतिहासिक समयरेखामा ऋषि यशैया र अन्य हिब्रू ऋषि(भविष्यवक्ताहरू)
“पवित्र पर्वत” मोरियाह पर्वत थियो, जहाँ परमेश्वरले अब्राहमको लागि भेडा छान्नु भएको थियो। “प्रार्थनाको घर” यो मन्दिर थियो जसमा येशूले नीसान १० को दिन प्रवेश गर्नुभयो। तथापि, केवल यहूदीहरू मात्र परमेश्वरको आराधना गर्न मन्दिरमा प्रवेश गर्न सक्थे। तर यशैयाले अघिबाटै थाहा पाइसकेका थिए कि ‘विदेशीहरू’ (गैर-यहूदीहरू) एक दिन उनीहरूको उपहार उहाँ द्वारा स्वीकार गरेको देख्नेछन्। यशैया मार्फत, येशूले घोषणा गर्नुभयो कि उहाँ द्वारा मन्दिर बन्द गरिनु भनेको गैर-यहूदीहरूको लागि खोलिनु हो। यो कसरी हुने छ भन्ने कुरा अर्को दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ।
दुःख भोगमा अघिल्लो दिनहरु
हामी त्यस सोमबारका घटनाहरूलाई समयरेखामा थप्दछौं, निस्तार-चाडको थुमा छनौट सम्बन्धी नियमहरू माथिल्लो तर्फ राख्दछौं र येशूको द्वारा मन्दिर बन्द गरिनु लाई तल्लो तर्फ राख्दछौँ।
हिब्रू वेदमा दिएको नियमहरूको तुलना सोमवार, दिन २ का घटानहरुसंग गरिएको छ
सुसमाचारको पुस्तकले येशू द्वारा मन्दिर बन्द हुनुको प्रभावलाई लिपिबद्ध गर्दछ:
१८. अनि मुख्‍य पूजाहारीहरू र शास्‍त्रीहरूले यो सुनेर उहाँलाई कसरी नाश पारौं भनी उपाय खोज्‍न लागे। किनभने तिनीहरू उहाँसँग डराउँथे, किनकि सारा भीड़ले उहाँको शिक्षामा अचम्‍म मानेका थिए।
येशू द्वारा मन्दिर बन्द हुनाले येशूले अगुवाहरूसँग एउटा संघर्षको सुरुवात गर्नुभयो किनकि उनीहरूले अब उहाँको हत्याको योजना बनाएका थिए। हामीले यसलाई अघिल्लो दिन ३ मा देख्छौं, येशूले हजारौं बर्षसम्म चल्ने एक श्रापलाई बोल्नुभयो।
लेखक Ragnarप्रकाशित 15/11/2020 19/11/2020 श्रेणिया येशू: परमेश्वरको अवतार प्रकट भयोटैग्स जुनसुकै हप्ताको घटनाहरू, जेसस र पैसा परिवर्तन गर्नेहरू, बृहदीश्वर मन्दिर, भेन्कटेश्वर मन्दिर, मन्दिर सफा, यहूदी मन्दिर, येशू मन्दिर सफा गर्नुहुन्छदिन २: येशूको द्धारा मन्दिर बन्द गरिनु… घातक प्रदर्शन तिर लैजान्छ पर एक टिप्पणी छोड़ें